China Fiebr laser fanapahana milina tsy misy fonony orinasa sy ny mpanamboatra | Qingyuan
Power 1500W ~ 4000W
Ny haben'ny latabatra 1500x3000mm
Manapaka loha Raytool-autofocus
Ny milina fanodinana laser manodin-drà dia be mpampiasa amin'ny fikirakirana ny vy karbaona, ny tsy misy vy, ny vy vita amin'ny vy, ny ravina nohosorana, ny takela-by aluminium. Ampiasao matetika ny fanodinana vy / birao / fananganana sambo ary fitaovana matevina hafa.
IPG Alemanina, na Raycus vita any Sina
Famerenana matetika laser
Rafitra mitondra fiara mekanika
Rack & Pinion, ATLANTA, Alemanina
Fanaraha-maso indostrialy, EVOC, Taiwan
0.2mm (ho an'ny fitaovana matevina ambany noho ny 0.4mm)
≤20mm ho an'ny vy vy
Mitohy ny ora fiasana
Max. Refy fanapahana
Fahamarinana fanapahana azo ovaina
Telo misy dingana 5 tariby AC 380V ± 5% ， 50Hz ± 1%
Cheeron Laser (QY Laser) dia fanta-daza amin'ny iray amin'ireo mpanamboatra fanapahana laser fibre 3015 3000w lehibe indrindra sy mpamatsy entana any Shina. Miaraka amin'ny vondron'olona matihanina sy mahomby, afaka manolotra anao izahay milina fanapahana laser 3015 3000w amin'ny vidiny ambany sy kalitao tsara amin'ny serivisy tsara indrindra.
Fampahalalana bebe kokoa ampio wechat toy ny etsy ambany: nacy2010-cloud
Previous: 15000W 2500x8000mm Masinina fanapahana laser
Manaraka: 1500W Sheet Ary Sodina fanapahana milina
Masinina fanapahana laser vita amin'ny laser
Fanapahana amin'ny laser vita amin'ny fibre
Masinina manapaka metaly laser
Cutter tamin'ny laser optika
Masinina manapaka laser fibre kely
3KW Laser Laser Cutter